ပထမ တကြိမ် မော်ရင်ဟို အထုတ်ခံခဲ့ရတုန်းက ဘုတ်အဖွဲ့ ကို သူ ဘာပြောခဲ့လဲ ဆိုတာ ပြန်ပြောင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ #တယ်ရီ - SPORTS MYANMAR
ပထမ တကြိမ် မော်ရင်ဟို အထုတ်ခံခဲ့ရတုန်းက ဘုတ်အဖွဲ့ ကို သူ ဘာပြောခဲ့လဲ ဆိုတာ ပြန်ပြောင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ #တယ်ရီ
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို အောင်မြင်မှု အများဆုံး ရယူထားပေးတဲ့ ပေါ်တူဂီ လူမျိုး နည်းပြ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်းသား ၊ ပရိသတ် တွေနဲ့ အတော်လေး ရင်းနှီး နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေး တွေ ရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ပထမ တကြိမ် ချယ်လ်ဆီး ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့စဉ် က ဖြစ်ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အနှစ် ၅၀ ကြာ ဝေးကွာနေတဲ့ အမှတ်ပေးဖလား ကို ပထမဆုံး အကြိမ် ပြန်လည် စွမ်းဆောင် ပေးခဲ့သလို ၊ ၄င်းရဲ့ လက်ထက် မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ ထိပ်တန်း ကစားသမား များစွာ ရှိလာခဲ့ပြီး ၊ ဥရောပ အလယ် မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ အင်အားကြီး အသင်း တသင်း အသွင် နဲ့ ရပ်တည် လာနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
၄င်းရဲ့ လက်ထက် မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အဓိက ကျောထောက် နောက်ခံ ကစားသမား တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဒီဒီယာ ဒရော့ဘာ ၊ ဖရန့် လမ်းပတ် ၊ ဂျွန်တယ်ရီ ၊ ပီတာချက် တို့လို ကစားသမား တွေ တဟုန်ထိုး ခြေစွမ်း တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ် ။ ၄င်းတို့ဟာလည်း ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို နဲ့ အခု အချိန် အထိ အရမ်း နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေး တွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မှာ ပထမတကြိမ် လမ်းခွဲခဲ့ရပြီး ၊ ထိုစဉ် က ရလဒ် မကောင်းတာတို့ ၊ အသင်း အတွင်း ပြဿနာ တွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် မဟုတ်ပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ ၂ဖက် သဘောတူ လမ်းခွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း ကပဲ ချယ်လ်ဆီး ကွင်းလယ်လူဟောင်း စတိဗ် ဆစ်ဝဲလ် က တယ်ရီ ၊ လမ်းပတ် ၊ ဒရော့ဘာ တို့ဟာ မော်ရင်ဟို အထုတ်ခံရတဲ့ အတွက် ငိုကြွေးခဲ့ကြကြောင်း ဆိုပါတယ် ။
မနေ့က Sky Sports နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ မှာတော့ တယ်ရီ က ဆစ်ဝဲလ် ရဲ့ အဆို ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး ၊ ချယ်လ်ဆီး အသင်းသား တွေဟာ မော်ရင်ဟို ရဲ့ ပထမ အကြိမ် လမ်းခွဲမှု အတွက် ငိုကြွေးခဲ့ကြကြောင်း နဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ ကိုလည်း မော်ရင်ဟို ကိုပဲ ပြန်ခေါ်ဖို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားရောက် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ပြန်ပြောင်း ပြောပြလာခဲ့ပါတယ် ။
တယ်ရီ က ” ဟုတ်ပါတယ် ။ ဟိုဆေး အထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ သတင်း ကို ကြားသိခဲ့ရတဲ့ နေ့က ကျွန်တော် တို့ အားလုံး ငိုကြွေးခဲ့ကြပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ သူ အထုတ်ခံရတော့မယ့် ကောလဟလ တွေကို သတိထားမိခဲ့တာ ဟာ ရာသီကုန်ခါနီး ပွဲတပွဲ မှာ အသင်း ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် သိပ်မကောင်းခဲ့တဲ့ အခိုက်အတန့် ကတည်းကပါ ။ ပြည်တွင်းလိဂ် အတွင်းမှာ လည်း ချန်ပီယံဆု ကို ကာကွယ်ဖို့ အခြေအနေ မကောင်းတော့တဲ့ အနေအထားမှာပါ ။ ”
” အဲ့ဒီ အချိန် မှာ ဟိုဆေး ဟာ အဝတ်လဲခန်း ထဲကို ဝင်လာပြီး အသင်းသား တွေကို ‘ ငါနဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်း က ပြီးဆုံးသွားပြီ ။ ငါ အထုတ်ခံလိုက်ရပြီ ။ ‘ လို့ ပြောပါတယ် ။ နောက်ပြီး အသင်းသား တွေကို တယောက်ပြီး တယောက် ဖက်လှဲတကင်း လုပ်ပြီး နွေးနွေးထွေးထွေး နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ။ ”
” ကျွန်တော် တို့လို အရွယ်ရောက်ပြီးသား ယောကျ်ား ရင့်မာကြီးတွေတောင် ‘ ငါတို့ ဒီကနေ ဘယ်လို ရှေ့ဆက်ရမှာလဲ ‘ လို့ စဉ်းစားပြီး ဝမ်းနည်းခဲ့ကြပါတယ် ။ ဟိုဆေး ဟာ ကျွန်တော် တို့ အတွက် ဖခင် တယောက် လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါ ။ သူဟာ ကျွန်တော် တို့ အတွက် အကောင်းအဆိုး မှန်သမျှ ကို လမ်းညွှန် ပေးခဲ့သူပါ ။ ”
” ဟိုဆေး အထုတ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် တို့ အတော်လေး စိတ်ပူမိပါတယ် ။ တဖက်မှာ ကျွန်တော် တို့ဟာ ဘုတ်အဖွဲ့ ကို ‘ နားထောင် ၊ ငါတို့ ဟိုဆေး ကို ဒီမှာပဲ ဆက်နေစေချင်သေးတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ သူ့ကိုပဲ ပြန်ခေါ်ပေးလို့ မရဘူးလား ? အခု ခင်ဗျား တို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် က အရမ်းကြီး မမြန်လွန်းဘူးလား ? သူဟာ ငါတို့ အလုပ် အတူ လုပ်လာခဲ့တဲ့ မန်နေဂျာ တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ‘ လို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ် ။ ”
” ဒါပေမယ့် ဘုတ်အဖွဲ့ က တာဝန်ရှိသူ တွေက ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို လုံးဝ ပြန်မပြင်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်မို့ ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ ဟိုဆေး ဟာ ချယ်လ်ဆီး ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ် ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ယောကျ်ား ရင့်မာ တွေ အနေနဲ့ ကျွန်တော် တို့ အားလုံး ဝမ်းနည်း ပူဆွေးစွာ ငိုကြွေးခဲ့ကြတာတော့ အမှန်ပါပဲ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။